3 Mahara Maturu Ekutora Zvinyorwa neMifananidzo paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
3 Mahara Maturu Ekutora Zvinyorwa neMifananidzo paGnu / Linux
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kusvika kwemakamera kumafoni mafoni kwakonzera vazhinji vedu kumira kushandisa uye kuva nesikena muhofisi, ichiri chishandiso chakakosha uye kune vazhinji chakakosha kuti chinoda kushanda nechero hurongwa hwekushandisa.
Tevere isu tichataura nezvazvo maturusi matatu atinogona kuisa mahara pane yedu Gnu / Linux kugovera, zvishandiso zvatinokwanisa kuisa uye zvinoenderana nema scanner ese ari pamusika.
1 Scan yakapusa
4 Ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka?
Nyore Scan chishandiso chiri nyore asi chine simba icho chinowanikwa mune zvese kugoverwa sezvo chichiuya nekumira muGnome. Vaya venyu vanoshandisa iyi desktop vanogona kuwana chirongwa ichi chine simba asi icho chinotarisa zvishoma nezvishoma. Nyore Scan inotumira kunze mhedzisiro mu pdf kana jpg fomati. Iyo yekumisikidza resolution yemagwaro ndeye 150 dpi uye 300 dpi yemifananidzo. Nyore Scan inotibvumidza isu kuodha zvekare mapeji kana isu takaongorora akati wandei magwaro.
Nyore Scan ndiyo yakapusa uye ine simba sarudzo yekutarisa magwaro. Ichowo sarudzo yemahara yatinogona kushandisa pasina dambudziko.
Skanlite ndeyevazhinji imwe sarudzo kune yakapusa Scan yeKDE. Zvisinei, Skanlite inopa dzimwe nzira dzakawanda uye mamwe mabasa achienzaniswa neRinyore Scan. Pakati pezvisarudzo izvi, Skanlite inopa kusarudza resolution yekutarisa, mukana we tumira kunze gwaro rakaongororwa muJPEG, PNG, BMP, PPM, XBM uye XPM mafomati kana pdf, txt uye odt kana ari magwaro. Uye poindi yakanaka yeichi chishandiso ndechekuti isu tinokwanisa kusarudza nzvimbo dzegwaro uye nekugadzira mafaera ega neaya akaongororwa zvikamu.
Kana isu tikango tarisa mifananidzo, chishandiso chikuru iGimp. Iyo inozivikanwa yemufananidzo mupepeti ine basa mune iyo File menyu iyo inotibvumidza isu kuti titarise mifananidzo uye kunyangwe magwaro. Chinhu chakanaka nezve ichi chishandiso ndechekuti mushure mekuongorora mufananidzo, isu tinokwanisa kudzoreredza uye kugadzirisa mufananidzo wakaongororwa. Yakanakira avo vanoshandisa iyo scanner sechishandiso chebasa Gimp inowanikwa mune angangoita ese maGnu / Linux mugove uye zvinozivikanwa.
Ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka?
Iko chaiko hakuna sarudzo iri nani pane imwe. Senguva dzose, Gimp ichave yatove muchikwata chako, saka ndinokukurudzira kuti uise chimwe chishandiso zvinoenderana ne desktop yako. Sezvinei, kana tikashandisa Gnome, gadza Rakareruka Scan uye kana tikashandisa Plasma, wobva waisa Skanlite. Chero zvazvingaitika, maturusi ese ari matatu sarudzo huru yekushandisa neyedu scanner kuongorora magwaro nemifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » 3 Mahara Maturu Ekutora Zvinyorwa neMifananidzo paGnu / Linux
Zvino Xane unovasiya kupi
Ndine urombo, ndinoreva Xsane
Canonical's gwaro scanner ndiyo yakanakisa sezvo inobvumidza iwe kurongedza iwo mapeji kuitira kuti iwe ugone kuita duplex scan kunyangwe yako scanner isiri.
Ngatione. Kutanga chirongwa chakanakisa pasina kuzengurira, kwekuita digitizing mifananidzo kana magwaro ari, nekure, XSANE. Yakaenzana inowirirana neanenge zvese zvishandiso, asi yakawanda zvakakwana kupfuura iwo aunotaura, kunyanya akareruka scan, izvo zvinopfuura zvakapusa uye zvakapusa segehena.
Kune rimwe divi, GIMP haiuyi neiyo yekushandisa yekushandisa nekutadza, asi iwe unofanirwa kuisa QUITEINSANE iyo iwe yaunoda distro neQt2.2.x kana yakakwira. Kune vashandisi veavice kana seni, vakasununguka, hazvizove nyore kuisa iyi GUI yeSANE. Kwaziso.
Iyo itsva vhezheni yeNextcloud 14 yave kuwanikwa
Alpine Linux 3.8.1 shanduro nyowani inowanikwa